Ndakasvira mukadzi walandlord ndamuona achishaina padoor pangu! – Makuhwa.co.zw
Ndakasvira mukadzi walandlord ndamuona achishaina padoor pangu!
Ndakasvira mukadzi malandlord ndamuona achishaina padoor pangu! Makambopinda mubrothel here ukanzwa nyaya dzinenge dzichitsva imomo? Ko iwo ma picture anenge ari kumadziro? Ini ndakapinda ndichiti kuda muHotel. Asi zvisinei ndati mumbonzwawo nyaya iyi yechihure.
And chihure chinondifambira kana ndichita zvekubira ne mukadzi wemunhu. After all iniwo ndiri murume wemunhu.Ndiye paya rimwe zuva vadzimai vangu vachiri kugara kumusha ikati yangu mboro yamira ndichangobva mukugeza. Zvevanhu vese vese wanike ini handidi ndikati ndoita sei? Ndikasinzwa aa kweshe kweshe pa window remba yandai lodger, ndokuvhura curtain ndikaona a mukadzi wa landlord. Apa aito polisha pa window.
Ndokufunga kuti ko kana ndika munyenga haaizotaura here? Ndakabva ndakumura zvese zvandaive nazvo ndokumira pabed ndichitaba nayo mboro yakaita se danda. Ndakazowona aa munhu haachada kupedza ku cleaner ndikaziva kuti naiye ainge akuvara. Ndaka murakidza sign yekuti uya tisvirane nechimunwe chakaita ” O ” chichipindwa nechimwe. Ndakaona abva pa window ndikati kuda ndamubhowa. After 3 min ndakanzwa avekukwesha floor achiuya ku door rangu.Akazovhura door asi ndokuramba akapfugama achikunya dress rake kuti ini ndione nyama dzese. Ndakanzwa tsinga dzose kuoma, iyo ichingo pfura pfura, ndikati neruoko pinda, pindaka. Ndikaona pindikiti tichibva taitana mutsimba uku kiss ichitsva. Ipapo ruoko rwangu rwakange rwave kuto tsvanzvadzira pane beche yake.Ndiye aa
ndikaona rikiti pamu beda wangu.
Related Topics:Ndakasvira mukadzi walandlord
MaTips ekudya mboro – musanyare ngaidyiwe freely!